Kaantaroolka heerkulka jirka ilmaha waa wax aad adigu waalid ahaan samaynkartid maalinkasta dhowr goor. Si tartiiba kor ugu qaad gacanta ilmaha kadibna dhig heerkulbeega kilinkilad ilmaha. Gacantaada korka ka saar ilmaha gacantiisa si ay u caawiso adiga oo ilmaha haya. Muddo yar kadib waxaad heerkulbeega ka maqlidoontaa cod yar oo biib leh markaa cabbirkii waa dhammaaday. Si tartiiba markale gacanta ilmaha kor u qaad kadibna ka saar heerkulbeega. Mari aalkolo heerkulbeega inta aanad ku ridin kiishii. Shaqaalaha ayaa ku tusaya sida aad samaynayso.